Tụgharịa ọdụ ụgbọ mmiri na BIOS
Ọdụ ụgbọ USB nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ndị ọkwọ ụgbọala na-efu, ntọala na BIOS ma ọ bụ njikọ na-emebi emebi nke ngwaọrụ. A na - ahụkarị nke abụọ n'etiti ndị nwe ụlọ ọrụ a zụrụ ma ọ bụ kpokọtara, yana ndị kpebiri ịwụnye ọdụ USB ọzọ na motherboard ma ọ bụ ndị na-ebigharị ntọala BIOS.
Ruo ogologo oge, ụdị isi nke motherboard firmware ejiri mee bụ BIOS - B dị ka m mpụtara / O utput S ystem. Site n'iwebata nsụgharị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ na ahịa, ndị na-emepụta na-eji nwayọọ nwayọọ na-agbanye na nsụgharị ọhụrụ - UEFI, nke na-anọchite anya U na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mfe F irmware m nterface, nke na-enye ndị ọzọ nhọrọ maka ịhazi na ịrụ ọrụ na osisi ahụ.
Hazie BIOS iji wụnye Windows 7
Na otu ma ọ bụ ihe ọzọ, nsogbu na ịwụnye Windows 7 nwere ike ibili na ụdị ọhụrụ ochie na nne ochie. Ọtụtụ mgbe, nke a bụ n'ihi na ezighi ezi BIOS nwere ike idozi. Ịhazi BIOS n'okpuru Windows 7 N'oge ntọala BIOS maka ịwụnye sistemụ ọ bụla, ihe isi ike bilitere dịka nsụgharị ahụ nwere ike ịdị iche na ibe.
Wepu paswọọdụ site n'aka BIOS
Na BIOS, ị nwere ike ịtọ paswọọdụ maka nchebe ọzọ nke kọmpụta, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ịchọọ ka onye ọ bụla nwee ike ịnweta os site na iji usoro ndenye. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chefuo paswọọdụ BIOS, ị ga-achọrịrị weghachite ya, ma ọ bụrụ na ị nwere ike kpamkpam ịnweta kọmputa.
Ịtọ Bios ka ị buo site na windo mbanye
Ezi ụbọchị. Fọrọ nke nta mgbe ọ bụla ị na-ebunye Windows, ị ga-edezi bọtịnụ BIOS buut. Ọ bụrụ na ịmeghị nke a, mgbe ahụ, ngwa USB flash nwere ike ịnweta ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ (nke ịchọrọ ịwụnye OS) agaghị ahụ anya. N'isiokwu a, m ga-achọ iji nlezianya tụlee kpọmkwem ihe setịpụrụ BIOS maka ịbịpụta site na windo mbanye (isiokwu ahụ ga-atụle ọtụtụ nsụgharị nke BIOS).
BIOS nbanye nhọrọ na laptọọpụ Lenovo
Onye ọrụ ojiji na-adịkarị mkpa ịbanye BIOS, ma ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ịkwesịrị imelite Windows ma ọ bụ mee ntọala ọ bụla, ị ga - etinye ya. Usoro a na laptọọpụ Lenovo nwere ike ịdị iche na-adabere na ihe nlereanya na ụbọchị ịhapụ ya. Anyị na-abanye BIOS na Lenovo Na laptọọpụ ọhụrụ kachasị ọhụrụ site na Lenovo enwere bọtịnụ pụrụ iche nke na-enye gị ohere ịmalite BIOS mgbe ịmaliteghachi.
Kwado BIOS Virtualization
Nje Virtualization nwere ike dị mkpa maka ndị ọrụ ndị na-arụ ọrụ na ngwaọrụ dị iche na / ma ọ bụ igwe arụmọrụ. Ha abụọ nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị ike ịgụnye nke a, ma, ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ dị elu mgbe ị na-eji emulator, ị ga-eme ya. Ịdọ aka ná ntị dị mkpa Ná mmalite, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji jide n'aka na kọmputa gị nwere nkwado maka ịmalite ịlụ.
Anyị na-emelite BIOS na laptọọpụ HP
BIOS abaghị ọtụtụ mgbanwe ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ọdịiche mbụ ya, mana iji mee ka PC dị mfe, ọ dị mkpa mgbe ụfọdụ iji melite ihe a dị mkpa. Na laptọọpụ na kọmputa (gụnyere ndị sitere na HP) usoro mmelite enweghị atụmatụ ọ bụla.
Esi tinye Bios na kọmputa na laptọọpụ. Igodo ịbanye Bios
Ezi ehihie Ọtụtụ ndị ọkachamara na-eche banyere otu ajụjụ yiri ya. Ọzọkwa, enwere ọtụtụ ọrụ na-enweghị ike idozi ma ọ bụrụ na i tinye Bios: - mgbe ịtinye Windows, ọ dị mkpa ka ị gbanwee ihe kacha mkpa ka PC nwee ike ịkpụ site na USB flash drive ma ọ bụ CD; - megharịa ntọala Bios ka ọ dị mma; - lelee ma ọ bụrụ na kaadị batrị dị; - gbanwee oge na ụbọchị, wdg.
Kwado ọnọdụ AHCI na BIOS
AHCI bụ ọnọdụ nkwadoro maka draịvụ ike na oge nne na nna na SATA njikọ. Na ọnọdụ a, data kọmputa na-agba ọsọ ọsọ. Emekarị ka AHCI bụrụ ihe ndabara na PC nke oge a, ma ọ bụrụ na ịdegharịa os ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ, ọ nwere ike gbanyụọ. Ozi dị mkpa Iji mee ka ọnọdụ AHCI dị mkpa, ịkwesịrị iji ọ bụghị naanị BIOS, kamakwa usoro sistemụ ahụ, dịka ọmụmaatụ, ịbanye iwu pụrụ iche site na "Iwu Iwu".
Na nsụgharị nke BIOS, a na-akpọ otu n'ime nhọrọ ndị a dị "Weghachi Defaults". A jikọtara ya na iweta BIOS na ala mbụ ya, mana maka ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ ọ chọrọ nkọwa nke ụkpụrụ nke ọrụ ya. Ebumnuche nke "Akwụsịghachite Mmejọ" nhọrọ na BIOS.Ọ ga-ekwe omume onwe ya, nke dị ka nke ahụ dị na ajụjụ, dị adị na BIOS ọ bụla, Otú ọ dị, ọ nwere aha dị iche dabere na mbipụta na onye nrụpụta nke motherboard.
Kedu ihe D2D weghachite na BIOS
Ndị na-arụ ọrụ laptọọpụ na ndị nrụpụta dị iche iche nwere ike ịchọta nhọrọ D2D na BIOS. O, dị ka aha ahụ pụtara, e mere iji weghachite. N'isiokwu a, ị ga-amụta ihe D2D weghachite, otu esi eji njirimara a na ihe kpatara na ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ. Uru na njirimara nke D2D Iweghachite Ọtụtụ mgbe, ndị na-arụpụta laptọọpụ (na-emekarị Acer) tinye D2D Recovery parameters na BIOS.
Anyị na-emelite BIOS na Gigabyte motherboard
N'agbanyeghị eziokwu na interface na ọrụ BIOS enwebeghị mgbanwe dị ukwuu site na mbido mbụ (afọ 80), na ụfọdụ ụfọdụ ọ na-atụ aro iji melite ya. Dabere na motherboard, usoro nwere ike ime na ụzọ dị iche iche. Nkà na ụzụ Iji nweta mmelite zuru oke, ị ga-ebudata nsụgharị ahụ dị mkpa maka kọmputa gị.
BIOS melite na laptọọpụ ASUS
A na-edozi BIOS na ngwaọrụ dijitalụ ọ bụla site na ndabara, bụrụ kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ desktọọpụ. Mpempe akwụkwọ ya nwere ike ịdịgasị iche dabere na onye nrụpụta na ihe nlereanya / onye nrụpụta nke motherboard, ya mere maka nke ọ bụla ị chọrọ ibudata ma wụnye mmelite site na otu onye mmepụta na otu nsụgharị.
BIOS melite na laptọọpụ Lenovo
BIOS bụ usoro nke mmemme ndị echekwara na ebe nchekwa nke motherboard. Ha na-eje ozi maka ezi mmekọrịta nke niile components na ngwaọrụ jikọtara. Site na version BIOS dabere n'otú ngwá ọrụ ahụ ga-esi arụ ọrụ. Site n'oge ruo n'oge, motherboard ndị mmepe na-ahapụ mmelite, dozie nsogbu ma ọ bụ na-agbakwụnye ihe ọhụrụ.
Nchọpụta nsogbu ACPI_BIOS_ERROR
Otu n'ime njehie kachasị mma nke na-arụ na kọmpụta na sistemụ arụmọrụ Windows bụ BSOD na ederede "ACPI_BIOS_ERROR". Taa, anyị chọrọ ịme ka ị mara nhọrọ maka iwepu ọdịda a. Idozi ACPI_BIOS_ERROR Nsogbu a na-eme maka ọtụtụ ihe kpatara ya, sitere na ngwụrọ ngwanrọ dị ka nsogbu ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ malfunctions ka ọdịda ngwaike nke motherboard ma ọ bụ components ya.
Ịhazi diski ike site na BIOS
N'oge arụ ọrụ nke kọmputa nkeonwe, ọ ga-ekwe omume na ọkpụkpọ diski diski na-enweghị ike ijikwa sistemụ arụmọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọnụnọ nke njehie dị njọ na mmejọ ndị ọzọ na OS. Nanị nhọrọ a ga-ahọrọ na nke a bụ ịkpụpụta diski ike site na BIOS.
Tụgharịa kaadị netwọk na BIOS
A na-egbochi kaadị netwọk, ọtụtụ mgbe, nye ndị nne na nna nke oge a na ndabara. Akụkụ a dị mkpa ka kọmputa wee jikọọ na Ịntanetị. Emekarị, ihe niile gbanwere na mbụ, ma ọ bụrụ na ngwaọrụ adaghị ma ọ bụ mgbanwe nhazi, ntọala BIOS nwere ike ịtọgharịa. Atụmatụ tupu ịmalite Dabere na mbipụta BIOS, usoro maka ịgbanwuo / kaadị kọnetị nwere ike ịdị iche.
Kedu ụdị SATA na BIOS
Otu n'ime ntọala BIOS bụ "SATA Mode" ma ọ bụ "On-Chip SATA Mode" nhọrọ. A na-eji ya iji gbanwee mita nke onye na-elekọta SATA. Ọzọ, anyị na-enyocha ihe mere ị ga - eji dị mkpa ịgbanwe ụdịdị na nke dabara na ochie na nhazi nke PC ọhụrụ. Ụkpụrụ nke ịrụ ọrụ nke SATA Mode N'ọkwà mgbochi ọhụụ dị ugbu a, enwere onye nchịkwa nke na-enye ihe nhịahụ siri ike site na interface SATA (Serial ATA).
Hotkeys (bọtịnụ): buut menu BIOS, Bọgharịa NchNhr, Bọtị Agụ, BIOS Ntọlite. Laptọọpụ na kọmputa
Ezi ụbọchị niile! Gini mere ị na-eburu ihe ị na-adịghị mkpa kwa ụbọchị? O zuru ezu imepe ma gụọ ihe ọmụma mgbe ọ dị mkpa - isi ihe bụ inwe ike iji! M na-emekarị nke a, onwe m anaghị egosikwa ... Nkọwa a bụ ntụle, ọ nwere bọtịnụ maka ịbanye BIOS, maka imepe bọtịnụ buut (a na-akpọkwa ya Boot Menu).
https://termotools.com ig.termotools.com © Bios 2020